I-Libra kunye ne-Aquarius yokuhambelana: ♥ Oku kukungalunganga ngokupheleleyo - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
I-Libra kunye ne-Aquarius yokuhambelana: ♥ Oku kukungalunganga ngokupheleleyo
Ukuhambelana kweLibra kunye neAquarius yeyona nto ifaneleke ngakumbi kubuhlobo kunobuhlobo obunzulu kuba ulindelo lwabo lwahlukile ekugqibeleni.
Njengemimoya emibini yokuthanda ubulungisa kwezentlalo, iminqweno kunye nemimoya edlamkileyo, aba bantu baya kuxoxa ngezinto kangangeeyure, bephuhlisa ithiyori malunga nokulungisa umhlaba. Bazokwazi ukukholisa abaphulaphuli babo kwaye banokudibana ngokwenza umbutho okanye ukujoyina izizathu zomlo. Ukongeza ekuthandaneni ngokungalawulekiyo, baya kuba ngabahlobo abasenyongweni, bexabisa ukungqinelana kwabo kwengqondo. Lumka, nangona kunjalo, ngeLibra engafuni ukukhokelela kwi-Aquarius enemvukelo kakhulu. Nangona kunjalo, olu lwalamano lunokubuyela umva; soze bakwazi ukufikelela kwisivumelwano. ILibra ayithandi ukwenza izigqibo kwaye iya kuxhomekeka kwi-Aquarius. Funda ezinye iinkcukacha ngokuhambelana kwazo kwaye ufumane amanqaku abo othando.
'ILibra kunye ne-Aquarius kufuneka bazisindise kabuhlungu.'
Inqaku lokuhambelana kweLibra kunye neAquarius: 2/5
Njengeempawu ezimbini eziphantsi kwento yomoya, aba babini baba ngabahlobo abakhulu okanye banokuguquka babe yintsapho eyonwabileyo. Ukuqonda, ukunyamezelana kunye nokunxibelelana okungamanzi, le duo inokuba ngabahlobo abakhulu . Njengabathandi, ubuntu buka-Aquarius budinga inkululeko engaphezulu kuneLibra, egxile kubomi basekhaya. ILibra kunye ne-Aquarius ngokwenene zikwi-wave length efanayo xa kuziwa kumaxabiso abo kunye nobukrelekrele. Uluvo lwabo ekwabelwana ngalo ngemfesane kunye nokulunga kunokubakhuthaza ukuba banikezele ngezizathu ezilungileyo.
uyenza njani into yokuba umntu we-sagittarius athandane nawe
Ngaba iLibra kunye ne-Aquarius banokuba nobudlelwane obuyimpumelelo?
Umngcipheko weLibra uyadika kulwalamano no-Aquarius Kwaye baya kukhetha ukuchitha ixesha nabahlobo babo kune-Aquarius. U-Aquarius unokugqibela ngokuqhuba iLibra kunye nokuziphatha kwabo njengomntwana. Ngokubhekisele kubomi babo bobulili, u-Aquarius uya kuziva ephantsi koxinzelelo ukuze aphile ngokuvisisana nolindelo lwesini seLibra. Ukutshintsha yinto enkulu kwiimpawu zomoya kwaye ewe, ukongeza kwiimvakalelo onazo, ungathetha kwaye uxoxe iiyure. Ungumlingane okhethekileyo osebenza kwisithende-senkosikazi, umntakwabo-dade, indlela yokuzithemba. Ukuqhubela phambili kunye, kuya kufuneka batshintshisane ngezimvo kunye nengxoxo. Ukuqonda kwabo kwengqondo kunokugqibelela ukuba banxibelelana kakuhle.
Libra, ukuba inkululeko ye-Aquarius ikulungele, kwelinye icala, uya kuba nengxaki enkulu ngakumbi xa ungaphuphi ngokungahambelani kunye nolawulo lwaseburhulumenteni! U-Aquarius ufuna inkululeko engakumbi kuneLibra, ngubani ojolise ngakumbi ekhaya kunye nothando. ILibra inokubandezeleka kukungabikho kwengqwalaselo evela ku-Aquarius, othanda wonke umntu ngokungakhethiyo kodwa nangaphezulu.
Uya kuba kwilifu lesithoba kwaye ubudlelwane bakho bunokuvela bube ngumbane! Inyaniso kukuba, esi sibini asinazo izakhiwo. Ukwenza kwabo uthando kunamandla, kuyadinisa kwaye akunakulibaleka.
Abanayo iminqweno efanayo okanye umbono ofanayo malunga nobudlelwane obuphilileyo, obeka emngciphekweni ukudala iingxaki ekuhambeni kwexesha.
Amakhandlela emiyalezo akuthumela ngeeLangatye zawo
Iimpawu zeZodiac zibekwe kwelona lihle ukuya kwamadoda nabafazi ababi
i-leo kunye ne-pisces iyahambelana
luhlobo olunjani lomfazi olufana nolwabantu besilisa
ubudlelwane be-aries kunye ne-libra
Iimpawu zobuntu zescorpio
ndingalufumana uthando kulonyaka
Yintoni etsalwa yigeminis